६० वर्षमा कर्मचारी सञ्चयकोष : लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब नाघ्यो, सञ्चयकर्तालाई के-के सुविधा छन् ? - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
६० वर्षमा कर्मचारी सञ्चयकोष : लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब नाघ्यो, सञ्चयकर्तालाई के-के सुविधा छन् ?
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोषले कूल लगानी सवा चार खर्ब नाघेको छ । कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कूल लगानी ४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुर्‍याएको हाे । कोषले विभिन्न आयोजना, परियोजना तथा संस्थामा ऋण तथा सेयर लगानी गर्छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष बिहीबारबाट ६०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।